Ukutya kwezilwanyana kunye nemifuno, yintoni na kwaye ungayenza njani? Fumanisa i-Intanethi ▷ ➡️ kwi-Intanethi
Ukutya kwezilwanyana kunye nezityalo kwaziwa ngokugcina imenyu efanayo naleyo yookhokho bethu. Indlela yokuphila isekwe kukutya okuvela ekuzingeleni nasekulobeni, nakwindawo yokutyala.
Kwesi sicwangciso sokutya, ukusetyenziswa kwemifuno, imifuno, inyama, amaqanda kunye neziqhamo kuyakhuthazwa. Ngamanye amagama, akukho ndawo yokutya okugqityiweyo okanye iswekile, kuphela ukutya okutsha, kwendalo.
Nangona kunjalo, indlela yokusebenza ayikokutya okuthintelweyo, kodwa kukuphinda kufundiswe ngokutya okusekwe ekusetyenzisweni kwezityalo kunye neeproteni. Ngale ndlela, umzimba uqala ukuqhelana nokutya okunempilo kunye nokuncinci.
Ke, phantse yonke into el mundo Ungayisebenzisa impilo yakho ngokulandela ukutya kwezilwanyana kunye nokutya, njengoko ukhusela ukungeniswa kokutya kwendalo.
1 Yintoni yokutya
1.1 · Inyama
1.2 Iziqhamo, imifuno kunye nohlaza
2 Ukutya okuvaliweyo
3 Ngaba ukutya kwezilwanyana kunye nemifuno kwenza ukuba unciphise umzimba?
Ziyimithombo yeprotheni, izondlo kwaye zingadliwa kwizilwanyana kunye nokutya kwemifuno. Umbono kukomeleza ubunzima bemisipha, unike umzimba ukwanela ngakumbi ukulawula ukutya.
Iiproteni ziyanceda ukubuyisa izicwili, kodwa kufuneka ulumke kakhulu. Ukutya kakhulu kunokuzalisa izintso, kunye nokonakalisa ikhalsiyam. Amaqanda avumelekile.
Iziqhamo, imifuno kunye nohlaza
Indlela ifuna ukusetyenziswa kwemifuno kunye neziqhamo ngobuninzi. Oku kutya ngowona mthombo uphambili wekhabhohayidrethi ekudleni, kwaye kuluncedo ekulinganiseni ukusetyenziswa kwenyama. Ke ngoko, kubalulekile ukuba ukhumbule ukuba kwabo bafuna ukunciphisa umzimba, ezinye izinto kufuneka zisetyenziswe ngokumodareyitha, ezinjengeebhanana, iivatala, iiavokhado, iitapile, iiyam kunye neetapile. Abo bakwinkqubo yokufumana ubunzima obucekeceke kufuneka banike ingqalelo ekhethekileyo kwezi ngcambu.
Ngaba ukutya kwezilwanyana kunye nemifuno kwenza ukuba unciphise umzimba?
Kuba esi sicwangciso sibeka phambili ukutya okusemgangathweni okusemgangathweni, unokuyiphucula impilo yakho yonke kunye nokutya okunesondlo. Ngapha koko, isenokunceda kwinkqubo yokunciphisa umzimba.